Gaas oo Qaramada Midoobay ka aqbalay in uu la heshiiyo Soomaaliland iyo Daljir oo ogaatay sababta – Radio Daljir
Gaas oo Qaramada Midoobay ka aqbalay in uu la heshiiyo Soomaaliland iyo Daljir oo ogaatay sababta
Nofeembar 21, 2018 8:39 b 0
iyaadoo wali Puntland iyo Soomaaliland ay isku hor fadhiyaan mudu ka badan 10 bilood deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ,dhowr jeer uu dagaal ku dhexmaray Tukaraq ciidamada Puntland iyo kuwa mamaulka Soomaaliland , ayaa waxaa dhinaca kale bar bar socotay wadahadalo lagu dhex dhaxaadinayo labada maamul oo ay garwadeen ka tahay Qaramada Midoobay.
radio Daljir ayaa ilo xogogaal ah waxa ay u sheegen in Madaxweynaha Puntland C/wali Cali Gaas uu aqbalay xabad joojin iyo in uusan wax dagaal ah ka dhicin doonin gobolka Sool, siiba deegaanka Tukaraq oo labada dhinac ay isku hor fadhiyaan.
Madaxweyne Gaas ayaa aqabalay soo jeedintii danjire Nicholas Haysom oo dhawaan safaro ku kala bixiyay magaalooyinka Hargeysa iyo Garoowe ,waxaana uu madaxweyne Gaas ergayga uu ucadeeyay in uusan marnaba dhici dooni wax dagaal ah oo dhanka Puntland ka yimaada .
C/wali Gaas ayaa horay uga diiday xabad joojintan ergaygii hore ee Qaramada Midoobay uqaabil sanaa arimaha Soomaaliya danjire Micheal Keating iyo xubno ka socday Urur goboleedka IGAD.
Soomaaliland ayaa horay dhankeed u aqabashay xabad joojintii ay ku dhawaaqday Qaramada Midoobay ,balse xiligaas Madaxweyne Gaas ayaa xabad joojintaasi ay ku dhawaaqday Soomaaliland waxa uu ku xiray sharuud ah in ciidamada Somaaliland ay isga baxaan Gobolka Sool .
Wali ma dhicin in madaxda maamulada Puntland iyo Soomaaliland in si fool ka fool ah ay isku soo hor fariistaa , base waxaa macquul ah in Madaxweyne Gaas iyo Muuse Biixi ay telfoonka ku wada hadleen.
Xukuumada uu hogaamiyo madaxweyne C/wali Gaas , ayaa haatan waxaa mudo xileedkeeda uga harsan wax ka yar boqo maalmood , waxaana soo food saaray madaxweynaha culaysyo siyaasadeed oo ay ka mid tahay khlaafka dhowladda dhexe, doorashada Puntland ku soo wajahan , iyo cabashada ciidamadii ee mushahar la,aanta ay haysato oo qaarkodba isaga soo baxay jiida hore ee dagaalka.
kala soco Daljir wixii ku soo kordha warkan .
Muuqaalka Bulshada: Daaweynta xanuunada jinka iyo sixirka iyo Xarunta Al-Cilaaj Daar -Taqwa (dhegayso)
Madaxwayne Trump oo laga sugayo jawaab inuu u helo doorkii dilka Jamaal Khashojji